Video: Wariye u afduuban ISIS oo warbixin kasoo diray Mosul - iftineducation.com
Video: Wariye u afduuban ISIS oo warbixin kasoo diray Mosul
iftineducation.com – Wariyihii u afduubnaa kooxda ISIS ayaa si layaab leh warbixin u kasoo duubay magaalada Mosul ee dalka Ciraaq, isagoo ugu waramaya xaalada nololeed ee magaalada ka jirta, taasoo uu ku beeninaayo wararar ay warbaahinta caalamka ka baahiyeen oo tilmaameyso in xaalad xun ka jirto Mosul.
John Cantlie oo u afduuban maliishiyada ISIS ayaa warbixintiisa ku sheegay in xaalada dhabta ah ee ka jirta Mosul oo ah magaalada Labaad ee ugu weyn Ciraaq in ay tahay mid aan waxba kaga duwaneyn magaalooyinka kale, dadkana noloshooda ku guda jiraan.
Hase ahaatee warbixintan ayaa u muuqata mid Probagaando loogu sameynayo maliishiyada Islaamiyiinta ISIS.
John Cantlie ayaa dhowr warbixin kasoo diyaray magaalooyinka ay maamulaan ISIS xili uu gacanta ugu jiro, waxaana sanadkii 2012 lala qabtayJames Foley oo ISIS gowracday.
RIIX HALKAAN KADAAWO MUUQAALKA
Muqdisho iyo is-dhexgal bulsho: Sawirro